Wo ne W’adamfo Ntam Reyɛ Asɛe a, Ma Onhu sɛ Woyɛ N’adamfo
ASETENAM NSƐM Me ne Anyansafo Anantew Ama Aboa Me
Momfa Nidi Mma Nea Nidi Sɛ No
Nya Gyidi—Sisi Gyinae Nyansam!
Fa Koma a Edi Mũ Som Yehowa!
Wode Wo Koma Besi Nea Wɔakyerɛw no So Anaa?
Bible Mu Din Bi a Wɔakyerɛw Agu Tete Ahina Bi Ho
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | March 2017
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mongolian Moore Motu Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Gianni ne Maurizio ayɛ nnamfo bɛyɛ mfe 50 ni. Nanso bere bi, anka wɔn ntam reyɛ asɛe. Maurizio kae sɛ: “Mekɔɔ tebea bi a emu yɛ den mu, na ɛma midii mfomso akɛse bi a ɛmaa yɛn ntam tetewee.” Gianni ka kaa ho sɛ: “Maurizio na ɔne me fii ase suaa Bible. Ɔno na na misuasua no wɔ Yehowa som mu. Enti na minnye nni sɛ obetumi ayɛ nea ɔyɛe no. Ɛyɛɛ me sɛ me wiase nyinaa aba awiei, efisɛ na minim sɛ yɛrentumi nyɛ nnamfo bio. Mihui sɛ mayɛ ankonam.”
NNAMFO pa som bo, na adamfofa a ɛtena hɔ kyɛ nso, ɛmma kwa. Sɛ yɛne yɛn adamfo ntam reyɛ asɛe a, dɛn na ebetumi aboa ama yɛasiesie yɛne ne ntam? Bible ka nnipa binom a na wɔyɛ nnamfo pa nanso akyiri yi anka wɔn adamfofa no reyɛ asɛe ho asɛm. Yebetumi asua nneɛma pii afi wɔn hɔ.
BERE A W’ADAMFO BI ADI MFOMSO
Akyinnye biara nni ho sɛ, na Dawid a ɔyɛ oguanhwɛfo ne ɔhene no wɔ nnamfo pa. Ne nnamfo no mu baako a ebia yɛkae no paa ne Yonatan. (1 Sam. 18:1) Nanso, na Dawid wɔ nnamfo foforo te sɛ odiyifo Natan. Bible nkyerɛ bere a wɔbɛyɛɛ nnamfo. Nanso, bere bi, Dawid ne Natan kaa atirimsɛm, sɛnea wo nso wubetumi ne w’adamfo bi aka atirimsɛm no. Ná Dawid koma so ade ne sɛ obesi ofie ama Yehowa. Esiane sɛ na Natan yɛ Dawid adamfo na ɔsan yɛ ɔbarima a Yehowa honhom wɔ ne so nti, ɛbɛyɛ sɛ na Dawid ntoto n’afotu ase koraa.—2 Sam. 7:2, 3.
Nanso, biribi sii a na ɛreyɛ asɛe wɔn adamfofa no. Ɔhene Dawid ne Bat-Seba sɛee aware. Ɛno akyi no, Dawid ma wokum Bat-Seba kunu Uria. (2 Sam. 11:2-21) Ná Dawid adi Yehowa nokware mfe pii, na na wabu atɛntrenee nso. Nanso afei de, na wayɛ bɔne a emu yɛ duru paa! Ɛbaa no sɛn na ɔhene pa yi yɛɛ saa? Adɛn, na onnim sɛ nea wayɛ no yɛ aniberesɛm anaa? Ná n’adwene yɛ no sɛ obetumi de asie Onyankopɔn anaa?
Dɛn na na Natan bɛyɛ? Obi foforo na na ɔbɛma wakɔka bɔne no ho asɛm akyerɛ ɔhene no anaa? Ná nnipa binom nso nim sɛnea Dawid hyehyɛɛ ho ma wokum Uria no. Sɛ saa a, adɛn nti na na ɛsɛ sɛ Natan de ne ho kogye asɛm no mu ma ɛsɛe ɔne Dawid adamfofa a na atena hɔ bere tenten no? Asɛm a na asi no, sɛ Natan kɔbɔ so a, na ebetumi de ne nkwa ato asiane mu mpo. Anyɛ yiye koraa no, na Dawid adi kan akum Uria a ne ho nni asɛm no.
Nanso, na Natan yɛ Onyankopɔn kasamafo. Ná odiyifo no nim sɛ, sɛ ɔka n’ano tom wɔ bɔne a akɔ so no ho a, ɛbɛsɛe ɔne Dawid ntam, na ɔno ankasa nso ahonim bebu no fɔ. Ná n’adamfo Dawid atu anammɔn bi a Yehowa ani nnye ho. Ná ɔhene no hia mmoa paa sɛnea ɛbɛyɛ a ɔne Onyankopɔn ntam bɛsan ayɛ papa bio. Nokwasɛm ne sɛ, na Dawid hia obi a ɔbɛda ne ho adi sɛ ɔyɛ n’adamfo paa. Na na Natan yɛ adamfo a ɔte saa. Bere a Natan reka Dawid bɔne no ho asɛm akyerɛ no no, ɔyɛɛ mfatoho bi a na ebetumi aka Dawid a wayɛ oguanhwɛfo pɛn no koma. Onyankopɔn asɛm a ɔde somaa Natan no, ɛno ara na Natan ka kyerɛɛ Dawid. Nanso, ɔyɛɛ saa wɔ ɔkwan bi so a ɛmaa Dawid hui sɛ wayɛ bɔne a emu yɛ duru. Na ɛkaa Dawid koma ma ogyee ne mfomso toom, na onuu ne ho.—2 Sam. 12:1-14.
Sɛ w’adamfo bi di mfomso kɛse bi anaasɛ ɔyɛ bɔne a emu yɛ duru a, dɛn na wobɛyɛ? Anhwɛ a ɛbɛyɛ wo sɛ, sɛ woka bɔne a w’adamfo no ayɛ no ho asɛm kyerɛ no a, ɛbɛsɛe wo ne ne ntam. Anaa ebia ɛbɛyɛ wo sɛ, sɛ woka bɔne a w’adamfo no ayɛ no ho asɛm kyerɛ mpanyimfo—a wobetumi aboa no ama ɔne Yehowa ntam asan ayɛ papa—no a, ɛbɛkyerɛ sɛ woayi w’adamfo no ama. Dɛn na wobɛyɛ?
Gianni a yɛadi kan aka ne ho asɛm no kae sɛ: “Mihui sɛ biribi asesa. Ná Maurizio nka ne tirim asɛm nkyerɛ me te sɛ kan no. Ná ɛyɛ den ma me paa sɛ mɛbɛn no, nanso meyɛɛ m’adwene sɛ mɛkɔ ne nkyɛn. Nea na meredwen ho ara ne sɛ: ‘Dɛn paa na metumi aka akyerɛ no a onnim dedaw? Mekɔ a, anhwɛ a na watutu bi ama me!’ Nanso, bere a mekaee nea na me ne no asua nyinaa no, ɛma minyaa akokoduru ne no kasae. Bere bi a atwam no, na me nso mihia mmoa, na Maurizio ne me kasae saa ara. Ná mempɛ sɛ me ne n’adamfofa no bɛsɛe, nanso esiane sɛ na midwen ne ho nti, na mepɛ sɛ meboa no.”
Maurizio ka kaa ho sɛ: “Gianni kaa asɛm no a wankatakata biribiara so. Nea ɔkae no nso, na ɛyɛ nokware turodoo. Ná minim sɛ nea efi gyinae bɔne a misii no mu bae no, ɛnyɛ Gianni anaa Yehowa na ɔma ɛbae. Enti migyee nteɛso no toom, na akyiri yi me ne Yehowa ntam san yɛɛ papa.”
BERE A ASƐM ATO W’ADAMFO BI
Ná Dawid wɔ nnamfo foforo a wɔbataa ne ho wɔ bere a ɔkɔɔ tebea ahorow a emu yɛ den mu. Wɔn mu baako ne Husai. Bible ka sɛ, na Husai yɛ “Dawid yɔnko.” (2 Sam. 16:16; 1 Be. 27:33) Ɛbɛyɛ sɛ na ɔyɛ ahemfie panyin, na na ɔsan nso yɛ ɔhene no adamfo paa. Ɛtɔ da a, na wɔsoma adamfo a ɔte saa ma okodi kokoam nsɛm bi ho dwuma.
Bere a Dawid ba Absalom tuu no fii agua so no, Israelfo bebree kodii Absalom akyi. Nanso, Husai de, wanyɛ saa. Bere a Dawid reguan no, Husai kɔkaa ne ho. Ɛyɛɛ Dawid yaw paa sɛ ɔno ara ne ba ne nnipa bi a na ogye wɔn di ayi no ama. Nanso, Husai kɔɔ so bataa Dawid ho. Ná Husai ayɛ krado mpo sɛ ɔde ne nkwa bɛto asiane mu akɔyɛ adwuma bi a na ɛbɛma atuatew no ayɛ kwa. Ɛnyɛ sɛ Husai yɛ ahemfie panyin ara kɛkɛ nti na ɔkɔyɛɛ saa adwuma no. Mmom no, nea ɔyɛe no kyerɛ sɛ na ɔyɛ adamfo pa.—2 Sam. 15:13-17, 32-37; 16:15–17:16.
Ɛnnɛ, ɛyɛ anigye paa sɛ anuanom mmarima ne mmea nyinaa fi wɔn komam dodɔ wɔn ho. Ɛnyɛ dwumadi anaa hokwan bi a ɛhyɛ wɔn nsa wɔ asafo no mu nti na wɔyɛ saa. Mmom no, nea wɔyɛ no, ɛte sɛ nea wɔreka sɛ, “Ɛnyɛ sɛ ɛsɛ sɛ mefa wo adamfo ara kɛkɛ nti na woyɛ m’adamfo. Mmom, woda me koma so paa.”
Onua bi a wɔfrɛ no Federico nyaa osuahu bi a ɛte saa. Ne yɔnko berɛbo bi a wɔfrɛ Antonio boaa no bere bi a ɔkɔɔ tebea bi a emu yɛ den mu. Federico kae sɛ: “Bere a Antonio baa yɛn asafo no mu no, ankyɛ koraa na yɛbɛyɛɛ nnamfo. Ná yɛn nyinaa yɛ asafo mu asomfo, na na yɛde anigye bom yɛ adwuma. Ankyɛ koraa na wɔpaw Antonio sɛ ɔpanyin. Ná ɔnyɛ m’adamfo kɛkɛ. Mmom, na ɔsan nso yɛ obi a misuasua no wɔ Yehowa som mu.” Ɛwom ara na Federico dii mfomso bi. Ɔyɛɛ ntɛm hwehwɛɛ mmoa fii asafo mu mpanyimfo hɔ. Nanso afei de, na ɔmfata sɛ ɔsom sɛ ɔkwampaefo anaa asafo mu somfo bio. Dɛn na Antonio yɛe?
Bere a asɛm too Federico no, n’adamfo Antonio tiee nea ɔwɔ ka, na ɔhyɛɛ no nkuran
Federico kae sɛ: “Mihui sɛ na asɛm a ato me no yɛ Antonio yaw paa. Ɔyɛɛ nea obetumi biara sɛ ɔbɛka me koma ato me yam. Nea na ehia Antonio paa ne sɛ me ne Yehowa ntam bɛsan ayɛ papa. Antonio annyaw me da. Ɔhyɛɛ me nkuran sɛ mensan nnyina me nan so wɔ Yehowa som mu, na mma mempa abaw.” Antonio kyerɛɛ mu sɛ: “Minyaa bere maa Federico paa. Ná mepɛ sɛ otumi ka biribiara kyerɛ me. Ɛyaw a ɔrefa mu no mpo, na mepɛ sɛ otumi ka kyerɛ me.” Anigyesɛm ne sɛ, ankyɛ na Federico san gyinaa ne nan so wɔ Yehowa som mu. Akyiri yi, wɔsan paw no sɛ ɔkwampaefo ne asafo mu somfo. Antonio wiee n’asɛm no sɛ: “Ɛwom, ɛsono asafo a yɛn mu biara wom seesei. Nanso, yɛn adamfofa no mu ayɛ den paa.”
WOBƐTE NKA SƐ WƆAYI WO AMA ANAA?
Sɛ asɛm to wo na wo yɔnko berɛbo yi wo baako hyɛ wo nsa a, wobɛte nka sɛn? Ɛbɛyɛ wo yaw paa. Ɛba saa a, wubetumi de w’adamfo no bɔne akyɛ no anaa? Sɛnea na wo ne ne ntam te no, ɛbɛsan asi ne dedaw mu anaa?
Ma yɛnhwɛ nea ɛtoo Yesu wɔ asase so bere a na aka kakraa bi ama wawu no. Ná ɔne n’asomafo anokwafo no abɔ bere tenten, na na wɔabenya abusuabɔ soronko bi. Ɛno nti, Yesu frɛɛ wɔn ne nnamfo. (Yoh. 15:15) Nanso, bere a wɔkyeree Yesu no, dɛn na esii? Asomafo no guanee. Ná Petro aka ama obiara ate sɛ ɔrempa ne Wura Yesu da, nanso saa anadwo no ara Petro kae sɛ onnim Yesu mpo!—Mat. 26:31-33, 56, 69-75.
Ná Yesu nim sɛ ɔno nkutoo na obegyina ne sɔhwɛ a etwa to no ano. Nanso ne nyinaa akyi no, nea Yesu asuafo no yɛe no, sɛ odii ho yaw anaa ɛhaw no mpo a, anka ɛyɛ ne kwan so. Nanso, sɛ yɛhwɛ nkɔmmɔ a ɔne n’asuafo no dii wɔ ne wusɔre akyi nna kakra bi no a, wanka biribiara a ɛkyerɛ sɛ n’asuafo no adi no huammɔ. Saa ara nso na wanka asɛm bi a ɛkyerɛ sɛ ɔwɔ wɔn ho menasepɔw anaa wanu ne ho sɛ ɔpaw wɔn. Yesu hui sɛ na ɛho nhia sɛ ɔka n’asuafo no sintɔ ahorow ho asɛm mmaako mmaako a nea wɔyɛe wɔ anadwo a wɔkyeree no no nso ka ho.
Mmom no, Yesu kaa Petro ne asomafo a aka no koma too wɔn yam. Yesu maa asomafo no hui sɛ ɔda so ara wɔ wɔn mu ahotoso. Nea ɔyɛe ne sɛ, nkyerɛkyerɛ adwuma a ɛsen biara wɔ nnipa abakɔsɛm mu no, ɔde ho akwankyerɛ maa wɔn. Ná Yesu da so ara bu asomafo no sɛ ne nnamfo. Ɔdɔ a Yesu daa no adi kyerɛɛ asomafo no kaa wɔn koma paa. Enti, wɔyɛɛ nea wobetumi biara sɛ wɔrenni wɔn Wura no huammɔ bio. Nokwasɛm ne sɛ, adwuma a Yesu de hyɛɛ n’akyidifo no nsa no, wɔyɛɛ no yiye paa.—Aso. 1:8; Kol. 1:23.
Onuawa bi a wɔfrɛ no Elvira werɛ mfii asɛm bi a esii ɔne ne yɔnko berɛbo Giuliana ntam. Elvira kae sɛ: “Bere a Giuliana ka kyerɛɛ me sɛ nea meyɛe no ahaw no no, ɛyɛɛ me yaw paa. Ɛyɛ ne kwan so sɛ ne bo fuwii. Nanso, nea ɛkaa me koma paa ne sɛ, me yiyedi ne nea ebefi me nneyɛe mu aba no, ɛno titiriw na na ehia Giuliana. Wamfa n’adwene ansi bɔne a meyɛɛ no no so. Mmom, sɛnea na merepira me ho no, ɛno na ɔde n’adwene sii so. Saa a ɔyɛe no, me werɛ remfi da. Meda Yehowa ase sɛ na mewɔ adamfo bi a onnwen ɔno nkutoo ho, na mmom ɔmaa me yiyedi ho hiaa no.”
Enti yemmisa sɛ, sɛ nnamfo bi ntam reyɛ asɛe a, dɛn na obi a ɔyɛ adamfo pa bɛyɛ? Ɔbɛtɔ ne bo ase ne n’adamfo no akasa bɔkɔɔ, na sɛ ehia sɛ ɔka asɛm no pefee a, ɔbɛyɛ saa. Sɛnea Natan ne Husai bataa wɔn adamfo Dawid ho bere a asɛm too no no, saa ara na adamfo pa bɛyɛ. Na sɛnea Yesu de n’asuafo no bɔne firii wɔn no, adamfo pa nso bɛyɛ saa ara. Wo nso ɛ? Woyɛ adamfo pa?
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM March 2017